Engabe iyozala nkomoni kowamanqamu weMTN8 | News24
Engabe iyozala nkomoni kowamanqamu weMTN8
PHOTOS: GALLO IMAGES UGeorge Lebese weKaizer Chiefs kulindeleke ukuthi aqhubeke nefomu yookuqhulula amagoli uma ezakhe sezibhekene ne-Ajax Cape Town emdlalweni wamanqamu weMTN8 Wafa Wafa ngoMgqibelo.
AKUCACI ukuthi iliphi iqembu elizokhala lemuke no-R8 million emdlalweni wamanqamu weMTN8 Wafa Wafa phakathi kweKaizer Chiefs ne-Ajax Cape Town ngoMgqibelo.
Into eyenza ukuthi kube nzima ukuqugula yingoba womabili la maqembu adlala kahle, okufakazelwa yikho ukuthi womabili azodlala kowamanqamu ale ndebe.
Lo mdlalo wefayineli noyindaba mlonyeni kulezi zinsuku phakathi uzobe useNelson Mandela Bay Stadium eBhayi (Port Elizabeth) ngalo Mgqibelo ngo-3 ntambama kanti kubhekeke ukuthi ukhiphe nesinedolo kuwowonke uMzansi. Ziningi izizathu ezenza lomdlalo ube sematheni nokwenza ukuthi kubhekeke uqophe umlando omusha ebholeni laseMzansi. Kufanele kukhumbuleke ukuthi izilwane zaseSoweto, iKhosi phela yibona oshampeni balendebe futhi kuyabonakala ukuthi ezikaKaizer Motaung zizozama ngayoyonke indlela ukuvikela le ndebe.
Kanti nomqeqeshi waMaKhosi osanda kuqala kule sizini, uSteve “Mphathi” Komphela akakaze ayinqobe indebe selokhu aqala ukuqeqesha ebholeni elikhokhelwayo, kusukela ngonyaka ka-2002.
Kanti iqembu laseKapa amaUrban Warriors lagcina ukufika kufayineli yalo mqhudelwano ngo-2009 lapho lathelwa ngehlazo yiLamontville Golden Arrows ngo 6-0. Phela kuzokhumbuleka ukuthi Abafana Bes’thende babaqeqeshwa uManqoba Brilliant Mngqithi kanti lo mdlalo wawubanjelwe e-Orlando Stadium.
Futhi-ke iKhosi lizobe lidlala kwifayineli yeMTN 8 Wafa Wafa okwesine. Ngaphambilini bakwazi ukunqoba kabili, bahlulwa kanye kanti nakulokhu kusobala ukuthi bafuna ukuyivikela inkomishi yabo njengoshampeni beMTN 8.
Umqeqeshi waMaKhosi uKomphela uthi usuku lwamanqamu luyobe lubalulekile kuwo womabili amaqembu, futhi-ke akekho obhekeke ukuthi alale ephaseji.
“Sonke sizimisele ngalo mdlalo, phela owamanqamu futhi akekho ofuna ukuyeka imali ewu-R8 million ihambe kalula. Kuzoba nzima kuwowonke umuntu kodwa thina njengoshampeni sifuna ukudlalisa okwamaqhawe futhi sikwazi ukuvikela indebe yethu.
“Phela iMTN8 yawinwa iChiefs ngesizini edlule,” kusho uKomphela.
Imenenja yeKhosi uBobby Motaung uthe AmaKhosi angeke avume nje ukuhlwithwa isicoco sawo noma yikanjani yi-Ajax.
Kanti umqeqeshi wama-Urban Warriors uRoger De Sa uthi impela ziyobambana ngezihluthu futhi kuyobonakala ngokusa ngoba phela kuyobe kumnyama phansi.
UDe Sa uthi iqembu eliyoba nenhlanhla yokushaya nokusebenzisa amathuba ngokufanele nangokucophelela yilo elizokhala lemuke nalesi sizumbulu semali.
“Womabili amaqembu adlala kahle kulezi nsuku futhi asethubeni elihle womabili.
“Mina ngithi abayodlula babe amaqhawe osuku futhi bahambe baye ekhaya nendebe abayoba nenhlanhla enkulu futhi bakwazi ukushaya amagoli emathubeni abayowenza,” kusho uDe Sa